किन अर्काकी श्रीमती ताक्छन् पुरुषहरु ? – samyantra.com
किन अर्काकी श्रीमती ताक्छन् पुरुषहरु ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २१, २०७४ समय: १४:१०:२१
यौन शब्दको हाम्रो समाजमा खुलेर प्रयोग गरिदैन हाम्रो समाजमा। तर यहाँ मात्रै होइन, विश्वका विभिन्न समाजमा पुरुषले युवती भन्दा परस्त्रीसँग सम्भोग गर्न मन पराउँछन् ।
यो मनोवैज्ञानिक स्वाभाव पनि हो । तर, परस्त्रीले पुरुषलाई कसरी आकर्षित गर्छ भन्ने कुरामा भरपर्छ । कुनै कुनै परस्त्री यस्ता हुन्छन् , जसलाई देख्ने वित्तिकै पुरुषको उत्तेजना १८० डिग्रीसम्म पुग्छ ।
परस्त्रीसँग आकर्षित हुने कारणहरु – जहिले पनि यौवनपूर्ण अवस्थालाई महिलाको आकर्षणसँग जोडिन्छ । पुष्ट अधर, कोमल छाला, स्वस्थ आँखा, चमक भएको केश तथा कसिलो शरीर भएका महिलालाई आकर्षक मानिन्छ ।
स्तन महिलाको अङ्ग भए पनि पुरुषले पनि यौन आनन्द प्राप्त गर्न यसप्रति आकषिर्त हुन्छन् । स्तनलाई महिलाको सुन्दरतासँग जोडिन्छ । प्रायः पुरुषले आफूभन्दा केही होचा महिलालाई रुचाएको पाइन्छ ।
केही अपवादलाई छोडेर प्रायः व्यक्तिले आफ्नो अनुहारसँग मिल्दोजुल्दो अनुहारमा विशेष आकर्षक पाउन सक्छ । दायाँबायाँ मिलेको हुनुका साथै अनुहारको माथिल्लो भाग (निधार भएको भाग), मध्यभाग (आँखा, नाक, गाला) अनि तल्लो भाग (ओठ, चिउँडो) समान अनुपातको हुनुलाई सुन्दर अनुहार मानिन्छ ।
तपाईं अहिले किशोरावस्थामै हुनुहुन्छ भने यो उमेरमा यौन भावनाको विकाससँगै विभिन्न किसिमका यौन परिकल्पना पनि गरिन्छ । यसै क्रममा विवाहित महिलाप्रति यौन रूपमा आकषिर्त हुन पुगिन्छ ।
युवा विवाहित महिलाप्रति आकषिर्त भए पनि उमेरको हकमा अझै पनि बढ्ने क्रममै हुन्छ । उपरोक्त कुराका आधारमा तपाईंले आफू यसरी विवाहित महिलाप्रति आकषिर्त भएको कुरालाई विश्लेषण गरेर कारण पत्ता लगाउनुभयो भने समाधानमा सहयोग पुग्न सक्छ ।
माथि गरिएका आकर्षणका कुरा हुँदाहुँदै पनि विवाहित व्यक्तिका लागि यो विवाहेत्तर सम्बन्ध हो । यसबाट श्रीमानलाई धोका दिएको नै मानिन्छ र सबन्ध–विच्छेदसम्म पनि हुन सक्छ । – अनलाइनहरुको सहयोगमा
रुपको धाक लगाउनेहरुलाई सम्झाउंदै अाए रामकृष्ण (भिडियो सहित)